Waa Maxay Caqabadaha Shaqo Ee Hortaagan Guddiga Madaxa Bannaan Ee Dib u Eegista Dastuurka? – Goobjoog News
Dr. Maxamed Daahir Afrax oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka oo goobjoog wareysi siiyay ayaa waxa uu ka hadlay wax yaabaha hortaagan in guddiga uu shaqadiisa gudan waayo.
Guddoomiyaha ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in dib u eegista tasduurka qaranka ay ka dhimantahay waxbadan loona baahanyahay in la dardargaliyo howsha dib u eegsita dastuurka.
Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista tastuurka Dr Maxamed Daahir Afrax waxa uu sheegay in waxbadan oo ay u ballaqan qaaday dowladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud aysan u fulin balanqaadkii, oo ay ka mid ahaayeen dhameystirka dib u eegista dastuurka qabashada doorasho qof iyo cod ah.
Sidoo kale wax yaabihii loo balan qaaday gudiga oo aan loo fulin waxaa ka mid ahaa kordhinta shaqaalaha guddiga bixinta gaadiidka iyo kharashaadka uu u shaqeynayo guddiga.
Guddoomiyaha ayaa dusha uga tuuray dowladdii hore inay ka gaabisay in guddiga uu howlihiisa guto isagoo sheegay in madaxdii xilligaas jirtay aysan dadaal ku bixin guddigaan.
Wareysi: Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan Ee Dastuurka